အက်စ်တိုးနီးယား- ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ရာသီဥတု | ကွန်ရက် မိုးလေဝသ
အက်စ်တိုးနီးယား- ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ရာသီဥတု
ဂျာမန် Portillo | 03/12/2021 10:00 | ရာသီဥတု
အက်စ်တိုးနီးယား ဥရောပမြောက်ပိုင်း ဘောလ်တစ်ဒေသရှိ ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မြောက်ဘက်တွင် ဖင်လန်ပင်လယ်ကွေ့၊ အနောက်ဘက်တွင် ဘောလ်တစ်ပင်လယ်၊ တောင်ဘက်တွင် လတ်ဗီးယားနှင့် အရှေ့ဘက်တွင် Peipsi ရေကန်နှင့် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံတို့နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။ ၎င်းတွင် ထူးခြားသောရာသီဥတု၊ ဘူမိဗေဒနှင့် ကွဲပြားမှုများရှိသောကြောင့် နက်နက်နဲနဲလေ့လာရကျိုးနပ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အက်စ်တိုးနီးယားအကြောင်း၊ ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများနှင့် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ သိလိုသမျှကို ပြောပြရန် ဤဆောင်းပါးကို အပ်နှံပါမည်။
2 Estonian ရာသီဥတု
4 အက်စ်တိုးနီးယားတွင် တစ်နှစ်၏ရာသီများ
အက်စတိုးနီးယားသည် ဧရိယာ ၄၅,၂၂၇ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၁၇,၄၆၂ စတုရန်းမိုင်) ရှိပြီး နူးညံ့သိမ်မွေ့သော ရာသီဥတုဒဏ်ကြောင့် ဖြစ်သည်။ Estonians များသည် Finnish ဖြစ်ပြီး Estonian ၏ တစ်ခုတည်းသော ရုံးသုံးဘာသာစကားမှာ Finnish နှင့် အလွန်နီးစပ်ပါသည်။
အက်စ်တိုးနီးယားတွင် လူဦးရေ ၁.၃၄ သန်းရှိသည်။ ၎င်းသည် ဥရောပသမဂ္ဂ၊ ယူရိုဇုန်နှင့် နေတိုးတို့၏ လူဦးရေအနည်းဆုံးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အက်စ်တိုးနီးယား ဂျီဒီပီသည် တစ်ချိန်က ဆိုဗီယက်ယူနီယံ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့သည့် နိုင်ငံအားလုံးတွင် အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ အက်စတိုးနီးယားကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ဝင်ငွေမြင့်စီးပွားရေးအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး OECD ၏ ၀င်ငွေမြင့်မားသော အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂသည် အက်စ်တိုးနီးယားသည် လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုညွှန်းကိန်း အလွန်မြင့်မားသော ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအဖြစ် စာရင်းသွင်းထားသည်။
အက်စ်တိုးနီးယားသည် မြောက်ဘက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။ သမပိုင်းဇုန်နှင့် တိုက်ကြီးနှင့် သမုဒ္ဒရာ ရာသီဥတုများကြား အသွင်ကူးပြောင်းရေးဇုန်. အက်စတိုးနီးယား (နှင့် ဥရောပမြောက်ပိုင်းအားလုံး) သည် မြောက်အတ္တလန္တိတ်၏ အပူဒဏ်ကို ခံရသော သမုဒ္ဒရာလေများ အဆက်မပြတ် အပူရှိန်ကြောင့်၊ ၎င်းသည် မြောက်လတ္တီကျုတွင် တည်ရှိသော်လည်း ပိုမိုပျော့ပျောင်းသော ရာသီဥတုရှိသည်။ ဘောလ်တစ်ပင်လယ်သည် ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ကုန်းတွင်းပိုင်းဒေသများကြား ရာသီဥတုကွဲပြားမှုကို ဖြစ်စေသည်။ အက်စတိုးနီးယားတွင် ရာသီလေးခုရှိပြီး အရှည်နီးပါးရှိသည်။ ဘောလ်တစ်ပင်လယ်ရှိ ကျွန်းများတွင် ပျမ်းမျှအပူချိန် 16,3°C (61,3°F) မှ 18,1°C (64,6°F) ကုန်းတွင်းပိုင်းဖြစ်ပြီး ဇူလိုင်လသည် အပူဆုံးလဖြစ်ပြီး ဘောလ်တစ်ပင်လယ်ကျွန်းများတွင် -3,5°C (25,7°F)၊ . 7,6°C (18,3°F) ကုန်းတွင်းပိုင်း၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ အအေးဆုံးလ။
အက်စ်တိုးနီးယားတွင် နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှအပူချိန်မှာ 5.2°C ဖြစ်သည်။ ဖေဖော်ဝါရီသည် တစ်နှစ်တာ၏ အအေးဆုံးလဖြစ်ပြီး ပျမ်းမျှအပူချိန် -5,7°C ရှိသည်။ ဇူလိုင်လသည် ပျမ်းမျှအပူချိန် 16,4°C နှင့် တစ်နှစ်တာ၏ အပူဆုံးလဟု သတ်မှတ်သည်။
အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ၊ မြောက်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ၏ ရေစီးကြောင်းများနှင့် အိုက်စလန်ဒီမီနီမာတို့၏ ရာသီဥတုကိုလည်း ထိခိုက်စေပါသည်။ အိုက်စလန်သည် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်မှုအတွက် လူသိများသောဒေသဖြစ်ပြီး ပျမ်းမျှလေထုဖိအားသည် အိမ်နီးချင်းဒေသများထက် နိမ့်သည်။ အက်စတိုးနီးယားသည် စိုစွတ်သောဧရိယာတွင် တည်ရှိပြီး မိုးရွာသွန်းမှုသည် စုစုပေါင်းရေငွေ့ပျံမှုထက် ပိုများသည်။ ၁၉၆၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၀ ခုနှစ်အတွင်း ပျမ်းမျှမိုးရေချိန်သည် တစ်နှစ်လျှင် ၅၃၅ မှ ၇၂၇ မီလီမီတာ (၂၁.၁ မှ ၂၈.၆ မီလီမီတာ)၊ နွေရာသီတွင် အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်သည်။ Saqqara နှင့် Hanja ကုန်းမြင့်၏ အနောက်ဘက် တောင်စောင်းများတွင် ပျမ်းမျှမိုးရေချိန် အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်လျှင် မိုးရက် 102 မှ 127 ကြားရှိသည်။ အက်စ်တိုးနီးယားအရှေ့တောင်ပိုင်းတွင် ဆီးနှင်းများဖုံးလွှမ်းမှုသည် နက်ရှိုင်းပြီး များသောအားဖြင့် ဒီဇင်ဘာလလယ်မှ မတ်လကုန်အထိ ကြာမြင့်တတ်သည်။
အက်စ်တိုးနီးယားတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် အရင်းအမြစ်များ နည်းပါးနေသော်လည်း၊ ဤမြေသည် ဒုတိယအရင်းအမြစ်မျိုးစုံကို ပံ့ပိုးပေးနေဆဲဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည်တွင် ရေနံ၊ ကျောက်တုံး၊ ထုံးကျောက် အမြောက်အမြားရှိပြီး သစ်တောများသည် မြေ၏ ၅၀.၆ ရာခိုင်နှုန်းကို ဖုံးလွှမ်းထားသည်။ ကျောက်တုံးကျောက်ခဲနှင့် ထုံးဆီအပြင်၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင် PR၊ asphalt amphibole နှင့် granite ၏ မဖွံ့ဖြိုးသေးသော သို့မဟုတ် တွင်ကျယ်စွာ မဖွံ့ဖြိုးသေးသော အရန်အမြောက်အများရှိသည်။
Sillamäe ယူရေနီယမ်၊ shale နှင့် loparite တို့ကို အသုံးချပြီး နှစ်ပေါင်း 50 ကာလအတွင်း ရှားပါးမြေအောက်ဆိုဒ် အများအပြားကို အမြီးများတွင် တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ရှားရှားပါးပါး မြေကြီးများ၏ ဈေးနှုန်း မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ အဆိုပါ အောက်ဆိုဒ်များကို ထုတ်ယူခြင်းသည် စီးပွားရေးအရ အားကောင်းလာပါသည်။ လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် တစ်နှစ်လျှင် တန်ချိန် ၃၀၀၀ ခန့် တင်ပို့နေပြီး ကမ္ဘာ့ထုတ်လုပ်မှု၏ ၂ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။
အစားအသောက်၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်စက်မှုလုပ်ငန်းများသည် Estonian စက်မှုလုပ်ငန်း၏ အရေးကြီးဆုံးသော လုပ်ငန်းခွဲများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် ဝန်ထမ်းပေါင်း ၈၀,၀၀၀ ကျော်ကို အလုပ်ခန့်ထားသည်။တစ်နိုင်ငံလုံး လုပ်သားအင်အား၏ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အခြားအရေးကြီးသော စက်မှုကဏ္ဍမှာ Ida-Viru ခရိုင်နှင့် Tallinn အနီးတွင် အဓိကအားဖြင့် တည်ရှိသော စက်မှုနှင့် ဓာတုဗေဒစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
ရေနံနှင့် ကျောက်တုံးတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် အရှေ့ဘက်နှင့် အက်စ်တိုးနီးယားတို့တွင်လည်း အာရုံစိုက်နေပြီး နိုင်ငံ၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ Shale oil ကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုသော်လည်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆိုးရွားစွာ ပျက်စီးစေပါသည်။. 1980 ခုနှစ်များကတည်းက လေထုထဲသို့ ထုတ်လွှတ်သည့် လေထုညစ်ညမ်းမှု ပမာဏသည် လျော့ကျလာသော်လည်း ဆိုဗီယက်ယူနီယံတွင် သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဖြစ်ထွန်းလာကာ 1950 ခုနှစ်များတွင် ထုတ်လုပ်သော ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်သည် လေထုကို ညစ်ညမ်းစေဆဲဖြစ်သည်။
အက်စတိုးနီးယားသည် စွမ်းအင်နှင့် ၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုအပေါ် မှီခိုသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်တွင် ပြည်တွင်းပြည်ပ ကုမ္ပဏီအများအပြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံလျက်ရှိသည်။ အက်စတိုးနီးယားတွင် လေစွမ်းအင်၏ အရေးပါမှုသည် တဖြည်းဖြည်း တိုးလာသည်။ စုစုပေါင်းလေစွမ်းအင် ထုတ်လုပ်မှုမှာ ၆၀ မဂ္ဂါဝပ်နီးပါးရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် လက်ရှိ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများသည် တန်ဖိုး ၃၉၉ မဂ္ဂါဝပ်ဝန်းကျင်၊ ၂၈၀၀ မဂ္ဂါဝပ်ကျော်ရှိသည့် ပရောဂျက်များကို တည်ဆောက်ဆဲဖြစ်သည်။. Peipus Lake ဧရိယာနှင့် Hiiumaa ကမ်းရိုးတန်းဧရိယာများတွင် အကြံပြုချက်များ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Estonian ဆောင်းရာသီသည် အလွန်အေးသည်- နေ့ခင်းဘက်တွင်ပင် အပူချိန်သည် အအေးခဲအောက်၌ အကြာကြီးရှိနေပါသည်။ ဇန်နဝါရီနှင့် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း ပျမ်းမျှအပူချိန်သည် ပင်မကျွန်းနှစ်ကျွန်း (Hiuma နှင့် Saaremaa) ၏ကမ်းရိုးတန်းတွင် -1°C အကြားရှိပါသည်၊ Tallinn ကမ်းရိုးတန်းနှင့် မြောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတွင် -3,5°C နှင့် ကမ်းရိုးတန်းတွင် -4°C။ စောင့်နေတယ်။ ရီဂါပင်လယ်ကွေ့တွင် အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် -5°C အထိ ကျဆင်းသွားသည်။
နွေဦးရာသီတွင် နေ့တာရှည်လာပြီး အပူချိန် နှေးကွေးလာသည်။ သောင်ရည်သည် ဧပြီလအစောပိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော်လည်း ဧပြီလနှောင်းပိုင်းနှင့် မေလအစောပိုင်းကြားတွင်ပင် အအေးဓာတ်နှင့် ဆီးနှင်းများ ရုတ်တရက်ပြန်ကျလာနိုင်သည်။ ဧပြီလသည် အလွန်ပြောင်းလဲနိုင်သောလဖြစ်သောကြောင့် အေးသောရာသီဥတုသည် လ၏ ဒုတိယနှစ်ဝက်တွင် စတင်ပေါ်လာနိုင်သည်။ မေလလယ်မှ စ၍ အပူချိန်ကို အများအားဖြင့် လက်ခံနိုင်သည်။
အက်စ်တိုးနီးယားတွင် နွေရာသီသည် သာယာသောရာသီ၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်သည် ၂၀/၂၂ ဒီဂရီ၊ ဆိုလိုသည်မှာ အပူချိန်မမြင့်သော်လည်း လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့် ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအတွက် သင့်လျော်သည်။ ညသည် အနိမ့်ဆုံးအပူချိန် ၁၂/၁၃ ဒီဂရီ (အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတွင် ၁၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ) ဖြင့် အေးသည်။
နွေရာသီသည် ပျမ်းမျှအားဖြင့် တစ်နေ့လျှင် သုံးပုံတစ်ပုံ မိုးရွာသောကြောင့် အလွန်မိုးရွာသော်လည်း နေကို မမြင်ရပေ။ ဆောင်းရာသီသည် မီးခိုးရောင်နှင့် မိုးရာသီဖြစ်သည်။ စက်တင်ဘာလတွင် အပူချိန်သည် လက်ခံနိုင်ဆဲဖြစ်ပါက၊ အောက်တိုဘာလနှောင်းပိုင်းတွင် ပထမဆုံးနှင်းကျခြင်းဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် အလွန်လျင်မြန်စွာ အေးသွားမည်ဖြစ်သည်။. နွေဦးနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဆောင်းဦးသည် တိုတောင်းသောနေ့ရက်များကြောင့် ပိုမှောင်သည်၊ ဤခြားနားမှုသည် နေရာတိုင်းတွင် သိသာထင်ရှားသော်လည်း Nordic နိုင်ငံများတွင် ပို၍သိသာသည်။
ဤအချက်အလက်ဖြင့် အက်စ်တိုးနီးယားနှင့် ၎င်း၏ရာသီဥတုအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ရာသီဥတု » အက်စ်တိုးနီးယား- ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ရာသီဥတု